Somaliland: Wax-qabadka Xukuumadda Axmed Siilaanyo Taariikhdaa Qiri Doonta
Home Opinion Wax-qabadka Xukuumadda Axmed Siilaanyo Taariikhdaa Qiri Doonta
5 sano ka bacdi, wax-qabadka baaxadda leh ee xukuumadda M/weyne Axmed Silaanyo waa mid aan la iska indha-tiri karin oo si cad u muuqda
Shan sano ayey ku sii siqaysaa markii ay Xukuumadda KULMIYE talada Jam.Somaliland la wareegtay. Ummadda JSL waxay si weyn uga dheregsan yihiin duruufaha dhaqaale, kuwa siyaasadeed iyo kuwa bulsho ee ay xukuumaddani ku bilowday markay talada dalka qabatay taasoo laga dhaxlay xukuumaddii ka horraysay ee talada dalka wareejisay. Waxay ahayd dhacdo la wada ogyahay in Xukuumadda hadda talada haysaa ay dhaxashay dal kacay, Bangi Dhexe oo haawanaya oo la faaruqiyey, shaqaalaha dawladda iyo ciidamada Qaranka oo aan dhawr bilood wax-mushahar ah qaadan. Xukuumadda M/w Ahmed Silaanyo waxaa horyaallay hawlo iyo carqalado badan iyo duruufo cul-culus oo kala duwan oo ay ka dhaxashay xukuumaddii talada wareejisay kuwaasoo u baahnaa in si degenaan iyo ka fiirsashaba leh loo maareeyo. Dhinaca kale, waxa jirtay filasho iyo yididiillo weyn oo ay shicibku ka qabeen in Xukuumadda M/w Ahmed Silaanyo ay la iman doonto isbeddel muuqda oo dhinacyo badan leh.
Xukuumadda M/w Ahmed Silaanyo waxay si weyn uga dheregsanayd in isbeddelka dhabta ah ee ay ummaddu Xukuumadda cusub ka naawilayaan aanu ahayn: Xukuumad Cusub oo bedesha Xukuumaddii ka horraysay, Madaxweyne iyo Wasiirradiisa oo Xilka, Xafiiska, Guriga iyo Gaadiidkaba ka tirsada kuwii ka horreeyey, iwm!! Isbeddelka dhabta ah ee ay ummaddu Xukuumadda M/weyne Ahmed Silaanyo uga fadhiday (intii itaalkeeda iyo awoodeeda ah) waa hirgelinta iyo ka rumaynta hanka, himilada iyo hiigsiga ay leeyihiin Shicib weynaha Jam.Somaliland (gudaha iyo dibeddaba). Xukuumadda M/w Ahmed Silaanyo waxay si weyn uga dheregsanayd in isbeddelka dhabta ahi uu yahay kii umadda geliya Rejo,Yididiilo iyo Kalsooni.
Haddaba, SHAN SANO KA BACDI, shacbiga JSL ayaa gar-soore ka ah wax-qabadka baaxadda leh ee ay xukuumadda M/w Ahmed Silaanyo soo bandhigtay muddadaa ay xilka haysay, waana wax muuqda oo aan la iska indhatiri karin. Haddii aynu wax yar tusaale ka soo qaadano: tayeynta qaybaha kala duwan ee xoogagga sugidda amniga qaranka taasoo ay maantaba muuqato in xukuumaddu ay ku guulaysatay in loo dhamaystiro derajadii iyo baahiyihii kale ee aasaa-siga ahaa, koboca dhakhliga iyo dhaqaalaha qaranka oo shan-jibbaarantay, waxbarashada iyo, caafimaadka oo ku tallaabsaday horumar laxaad leh, ganacsiga iyo maalgashiga dalka oo si weyn u kordhay, sahaminta iyo soo-saarka khayraadka dabiiciga ah ee dalka ceegaaga, horumarka siyaasadda arr. dibedda, dib u dhiska dalka iyo adeegyada guud ee bulshada, daryeelka danyarta, iwm. Hoggaanka waayeelnimo iyo talo-wadaagga uu la yimid M/weyne Axmed Silaanyo waxay kor u qaadday isku kalsoonida, rejada, filashada iyo yidi-diillada shacab weynaha Jam. Somaliland gudaha iyo dibeddaba.
Siyaasad Fur-furan oo ku Dhac leh:
Siyaasaddu waa wax kala goosasho, wax-kala-iibsi, gor-gortan xeeladaysan, dano gaar ah iyo maslaxado taasoo u baahan fiiro dheeri iyo feejignaan weyn oo lagaga faa’idaysan karo fursadaha kula soo gudboonaada! Waqtigan casriga ah way adagtahay in laga sii saadaaliyo qaabka ay u socdaan iyo xawliga ay ku socdaan isbeddellada dhaqan-dhaqaale, kuwa siiyaasadeed iyo nabad-gelyo ee guud ahaanba dunida ka dhacaya. Danaha iyo maslaxadaha u dhexeeya dalalka dunidu waqtigan xaadirka ah waxaad mooddaa inay intii hore ka xiise iyo xammaasadba badan yihiin, mana aha kuwo si weyn la isugu hallayn karo. Sida keliya ee uu dalkeenu xidhiidhka beesha caalamka iyo danaha uu dunida ku leeyahyba ku waajihi karaa waa isagoo la yimaadda Siyaasad feejignaan, ku dhac iyo hadaf muuqdaba leh oo lagaga faa’idaysan karo fursadaha la soo gudboonaada.
M/weyne Axmed Silaanyo wuxuu go’aansaday inuu la yimaado Siyaasad cusub oo fur-furan oo ku dhac iyo ku dhiirashoba leh taasoo dalka iyo dakaba u horseedi karta wax kasta oo magac, mansab, maamuus iyo manfacba u leh. Xukuumadda hadda talada haysaa waxay go’aansatay inay la timaado Siyaasad cusub oo fur-furan oo ku dhac iyo ku dhiirashoba leh taasoo ku salaysan wada-shaqayn, iskaashi iyo wax-isdhaafsi. Siyaasadda hagta Xukuumadda M/weyne Silaanyo waa siyaasad aan sugayn in keliya dunidu ay iyada fahanto ama ay iyada uun wax la taro, balse waa siyaasad diyaar u ah inay iyaduna dunida wax ku soo kordhiso.
Qof isagu ama koox iyaga ay Guusha Xukuumaddu ku tallaabsato uga dhigantahay guuldarro oo wanaagga iyo horumarka ummaddooda u soo kordha aan indhahoodu arkayn isuna arka inay iyagu ka qadayaan mooyaane, horumarka iyo wax-qabadka ay xukuumadda M/weyne Ahmed Silaanyo muddadaa ay xilka haysay ku tallaabsatay ka weyn wax la qariyo oo la iska indho-tiro. Guusha ay Xukuumadda ku tallaabsato, dhan kasta oo ay tahayba, cidina gaar uma laha oo cidna lagama xigo lagamana sheegan karo! Xukuumaddu markay guulaysato macnaheedu waa Ummadda Jam.Somaliland oo dhan ayaa Guulaystay!!
Guntii iyo gebagabadii, Xukuumadda M/weyne Ahmed Silaanyo waxaan si kalsooni leh ugu hambalyeynayaa siday ugu guulaysatay in Jam.Somaliland ay fagaarayaasha caalamka ku soo bandhigto qadiyaddeeda, si dhiirran oo aan gabbasho lahayna ka sheegato garteeda iyo xaqa ay ummadda Jam. Somaliland u leeyihiin inay noqdaan qaran xor ah oo xaq u leh inuu helo aqoonsiga beesha caalamka.
Ha noolaato Jam. Somaliland
W/Q: Eng. Hussein Adan Igeh (Hussein Deyr) |
Somaliland: Badhasaabka Gobalka Hawd Oo Sheegay In Wakiilka Somaliland Ee Djibouti Uu La Baxsaday Baabuur Ay Wasaaradda Daakhiligu Isaga U Qorshaysay